Iska Horimaad u dhexeeya Ciidamo kawada tirsan DKMG oo Muqdisho kadhacay – SBC
Iska Horimaad u dhexeeya Ciidamo kawada tirsan DKMG oo Muqdisho kadhacay
Muqdisho: Ciidamo ka wada tirsan Dowlada KMG ah ee Soomaaliya gaar ahaan maamulka Degmada Dharkiinley ee magaalada Muqdisho ayaa isku rasaaseeyay gudaha degmada Dharkinley.
Tacshiiradan ayaa timi ka dib markii ciidamo qaab beeleed u degen ay go’aan sadeen in daqliga degmadaasi soo gala wax laga siiyo laakiin waxaa arinkaasi gaashaanka u daruuray ciidamada Maamulka Degmadaasi Dharkinley oo sheegay in daqliga ka soo xarooda degmada la siiyo ciidamada Maamulka.
Dhowaan ayay aheyd markii labadan dhinac ee is rasaaseeyay ay isku dagaaleen guri dayactir lagu sameynayay oo ku yaala gudaha dharkinley, ka dib markii ciidamada qaab beeleed ka ku jooga ay damceen in ay hor joog sadaan lacago qaab canshuureed loogaga qaadi lahaa guriga la dayac tirayay .
Ciidamadan ayaa ah kuwo ka tirsan militeriga Dowlada KMG ah, waxaana ay qaateen magaca ciidan beeleed ka dib markii ay qaab beeleed u difaaceen guriga uu maamulka ka qaadi lahaa lacagta canshuurta ah .
Si kastaba ha ahaatee waxaa soo laalaabanaya is afgaranwaaga u dhexeeya ciidamada Militeriga ah ee qaab beeleedka u jooga degmada dharkinley iyo kuwa maamulka degmada ee DKMG ah, waxaana la dareemi karaa dhaq dhaqaaq ay labada dhinac halkaasi ka wadaan .
Waxayna dhaq dhaqaaqyadaasi saameyn ku yeesheen dhaq dhaqaaqa ganacsi iyo dadweynaha ee degmada dharkinley .